Kaliya Maxaa Dhakhtarku Amray? | Martech Zone
Kaliya Maxaa Dhakhtarku Amray?
Arbacada, Agoosto 24, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisii, waxaan soo qaatay ganacsi / safar qaas ah oo illaa Victoria iyo Vancouver, British Columbia. Waxaan ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee ku yaal Vancouver 20 sano ka hor waxaan kaliya laba jeer soo noqday. Waa magaalo la yaab leh - nadiif ah, qurux badan, casri ah oo caafimaad leh. Waqti ayaan la qaatay saaxiibkeygii ugu fiicnaa dugsiga sare xitaa waxaan helnay 9 god oo golf ah. Waxay ahayd isbuuc dhammaad wanaagsan! (Ganacsiguna sifiican buu usocday, sidoo kale!)
Waxaan ogaaday laba waxyaalood intii aan halkaas joogay. Mid ayaa ahayd la'aanta dadka cayilan. Isagoo ku garaacaya sida ay umuuqato, waxaa jiray dad yar (aniga ayaa kamid ahaa). Runtii waxaan u maleynayaa inay jirto jawi aad uga wanaagsan oo ku habboon caafimaadka halkaas oo ku yaal Vancouver. Socodku waa caadi maadaama ay jiraan dukaamo iyo dukaamo u dhow guryaha. Waxaan habeen ku hoyanay magaalada Sabtidii oo aan u lugeyn jirnay kolba meel (Meel kasta waan iska daalay, sidaa darteed dhowr jeer ayaan taksi helay!)
Qodobka kale ee aan ogaaday wuxuu ahaa saameynta ay daryeelka caafimaad ee qarameed ku yeelatay ganacsiga yar yar iyo ganacsiga. Cabsi ma qabtid inaad ka tagto shaqadaada oo aad halkaas ka bilowdo ganacsi kuu gaar ah. Waa wax aniga ila mid ah oo Aabbe keligiis ah. In kasta oo aanan u doodeynin xafiis dawladeedka dawladeed iyo dhammaan waxqabad la'aanta ku soo kordhay, haddana waxaan aaminsanahay inay jiri karto meel lagu farxo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko saameynta ganacsiga iyo koritaanka ganacsiga yar yar oo qeyb ka ah wadahadalka Mareykanka. Waxaa laga yaabaa inaan ka heli karno dhexdhexaad dhexdhexaad ah, halkaas oo dowladdu ka caawiso daryeelka caafimaadka yar yar sanadka ugu horeeya. Xaqiiqdiina waxaan ubaahanahay inaan wax ka qabanno caymiska 'gouging' ee ka socda ganacsiga ilaa ganacsiga, iyo shaqsi shaqsi.
Caafimaadka wanaagsan waa in lagu abaalmariyaa khidmadaha hoose, sida wadista wanaagsan ay ugu dhacdo caymiska baabuurta. Waxaa laga yaabaa in lakabka 'Daryeelka Caafimaadka Daryeelka' lagu dari karo kharashyadayada caymiska ee hadda jira oo na dabooli doona xilliyada shaqo la'aanta ama bilowga wejiyada ganacsiga yar yar.
Wali ma ihi u doodaha daawo qaran. Waxaan aaminsanahay haddii aad rabto inaad aragto ganacsi kasta oo si liidata u socda, si fudud ugu wareeji dowladda inay sameyso! Laakiin ka madax-bannaanida cabsida luminta dheefaha ayaa xannibaysa ruuxa ganacsi ee halkan Mareykanka ka jira.
Dadku waa inay xor u ahaadaan inay bilaabaan ganacsi yar iyagoon ka baqayn inay waayaan caymiskooda caafimaad!
Tags: daryeelka caafimaadka Kanadacaymiska caafimaadkadaryeelka caafimaadkahal bixiye
Iska dhaaf Cookie-ka ugu dambeeya
26, 2007 at 10: 40 AM
Hagaag waxaan u arkaa tan inay ka jawaabeyso su'aashaydii hore ee dun kale.
Waxaan ahay 100% waan ka soo horjeedaa dowlada waxkasta oo ay maamusho…
Waxaa jira sabab ay dadka Kanada ka yimid ugu dhaqaaqaan xagga caafimaadka xagga koonfureed.
Waxaan kula jiraa dawladda… haddii aad rabto inaad warshad dhulka ku kaxayso, kaliya hoos dhig xafiiska xafiisyada dawladda. Taasi waxay tiri, Universal Healthcare uma baahna 100% inay maamusho dowladda, in kastoo, sida Kanada.
Waxaan aaminsanahay inay labadaba noqon karto mid gaar loo leeyahay oo caalami ah. Haddii qof doonayo inuu wax ka bixiyo jeebkiisa (sida Kanadiyaanka u sameeya kuwa Koonfurta ka yimaada), markaa maxaad ugu oggolaan weyday?